5 qaababka cusub ee AutoCAD 2013 - Geofumadas
Disember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, egeomates My
Qaar ka mid ah tabo cusub waxaan arkay in version beta ee AutoCAD 2013 u yeedhay daamanka for version this inoo sheegayaa waxa aan ahaan lahaa maxaa yeelay, isbeddellada sanad April 2012, marka ay si rasmi ah bilaabi doonaa; inkasta oo aan si qarsoodi ah u dheefnaa Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012.
Bilowgiiba warkii horey loo ogaa: Qaab cusub oo ah 'dwg' 2013 '! Waxa dhacaya waa inaysan naga yaabin, maxaa yeelay si xun ayaan ula qabsannay waxaan fahamsanahay in AutoDesk ay sidan sameyso 3dii sanaba mar (Sanad kasta waxaan u adeegsan jiray), sidaa darteed mudd 2010 waqtigiisii ​​wuu dhammaaday, kaasoo lamid ahaa 2011 iyo 2012. In kasta oo AutoDesk ay tiraahdo waa in la wanaajiyo qaabka, waxaan fahamsanahay inay sidoo kale tahay in la xakameeyo tartamayaasha lana carqaladeeyo nolosha barnaamijyada OpenSource. .
Laakiin si aad u aragto in wax kasta oo xun uusan ahayn, hadda AutoCAD 2013 waa luqado badan (si fiican u dhow). Looma baahna wixii hadda ka dambeeya in nooc kasta lagu rakibo luqadda gaarka ah, laakiin waad soo degsan kartaa luqad kale oo aad ku rakibi kartaa ... sida barnaamijyada kale u sameeyaan (800 sano ka hor)
Waxaa sidoo kale jira horumarin ku saabsan shaqeynta Ribbon, in ka badan in la raadiyo amarrada. Ka dib markii Ribbon yimid, shaqooyinka ayaa la kordhiyay taasoo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh, gaar ahaan kuwa macnaha leh. Waxaa lagu arki karaa amarrada sida Array iyo Hatch, in halkii laga qaadi lahaa daaqadda dhibaysa ee dhibta leh waxaa lagu soo bandhigaa palette madaxa, iyadoo la fududeynayo aragtida hore iyo xulashooyinka is-dhexgalka ah.
1. Gudiga soo dhaweynta
Guddi soo dhaweyn ah ayaa la isku daray markii la bilaabayay barnaamijka, wax la mid ah guddiga uu leeyahay Corel Draw X5, oo leh xulashooyin lagu sameeyo sawir cusub, la furo mid jira, tusaalooyin furan ama la ogaado waxa ku cusub nooca. Waxqabadka waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan adeegsadayaasha cusub ee soo gala oo aan helin waxa lagu sameeyo badhanka aadka u kala firidhsan, waxa kale oo jira marin u helka fiidiyowyada bilowga iyo isku xidhka shabakadaha bulshada ee Facebook iyo Twitter.
Hoos waxaad ku leedahay ikhtiyaar inaad ka fogaato tan markaad geleyso, sidoo kale waxaa laga wici karaa liiska caawinta. Sidoo kale caawimaaddu waxay hadda noqon kartaa mid aan khadka lahayn.
2. Khadka Taliska
Nooca 'AutoCAD 2012' ikhtiyaarka ah in la buuxiyo amarrada ayaa lagu daray, in kasta oo ay tani tahay waxqabad qadiim ah, way adkaan doontaa inay gebi ahaanba baaba'do. Hadda ikhtiyaarka laga saari karo daaqad sudhan ayaa la dhigay, otomatiga ayaa la qabsan kara xulashooyinka meelaynta kala duwan.
Koorsada AutoCAD 3D kaliya US $ 34.99
Waxay ila tahay inaan ahay mid ka mid ah isbeddelada ugu wanaagsan ee ay adeegsatay AutoDesk, oo ka bilaabmay AutoCAD 2011, khadka amarka taariikhi ah wuxuu hayaa hufnaan, sidaa darteed ma dhibayo sawirka ama goobta shaqada wax ka yar. In kastoo aan caddeynay -iyada oo ay ugu wacan tahay faragalinta mid ka mid ah faallooyinka- waxay taageertaa midabka iyo amarka beddelaadku wuxuu muujinayaa xarafka midab kale ah, ma aha wax cusub; laakiin hadda waa suurtagal in la gujiyo ikhtiyaarka, kaas oo aan aaminsanahay in isticmaalka taariikhda hore ee kumbuyuutarka uu hubaal u dhiman doono tartiib tartiib ah, maaddaama badhanka midig ee midig uu xoogaa dhib ahaa. Intaa waxaa sii dheer, waxaan aaminsanahay in awoodo dheeri ah la isku dari doono si looga fogaado kiiboodhka, sida gala, boos ama cabbir.
In kasta oo wax kasta, khadadka taliska ayaa had iyo jeer ka fiicnaa Keyin of Microstation waxayna ku kacaysaa dadka isticmaala dhaqameedka inay sii daayaan; inkastoo loogu talagalay dadka isticmaala AutoCAD markii ugu horeysay ee horayba loo yaqaanay "Ribbon", waxay sii wadi doonaan inay ka fikiraan in ay tahay howl gabowda sida DOS Komsa.
3. Horudhaca isbeddelada
Hadda, haddii aad haysato wax la soo xushay oo qolka aqalka ayaa kor loo qaadayo, suurtagal maaha in hore loo arko sida ay noqon doonto qabsashada iyo khadadka dhibcaha. Taasi sii ahaan mayso kiiska ... isbeddelku aad buu u wanaagsan yahay inkasta oo aan filayno in lagu kordhiyo aragtida isbeddelka nooca sadarrada, farta ama astaamaha cabbirka
4. Dukumentiga Model-ka ah
Tan waxaa lagu hirgeliyay AutoCAD 2012, qaabkan wuxuu keenayaa horumarin cusub, oo runtii aad ufiican oo lagula tacaalayo jarista iyo iskutallaabyada waxyaabaha 3D. Tani waxay si gaar ah uga muuqataa dillaacista googoynta, maaraynta noocyada kala duwan ee unugyada, fidinta isugeynta iyo cabir wadaagga Inkasta oo tani ay leedahay awood badan oo ku saabsan maaraynta qaabeynta, wax aad u yar ayaa loo qoondeeyay dadka isticmaala aagga madaniga ah, gaar ahaan sababtoo ah waxay yihiin mowjado halkaas loo dhigay si ay u raadsadaan waafaqsanaanta Inventor (xitaa hadda moodooyinka Inventor waa la soo dejin karaa); Dhinaca Bentley waxaa loo arkaa inbadan iyadoo la hirgalinayo qeybaha firfircoon ee goosgooska sare.
5. Taageerada daruuraha dhibic
Sidoo kale maahan wax gebi ahaanba cusub, in kasta oo hadda ikhtiyaarku ka muuqdo Ribbon-ka hoosta xulashada Gelinta, xoogagga qaarna waa la ballaariyay. In kasta oo hagaajinta maareynta tixraacyada dibedda iyo feylasha feylku wali ay xun yihiin (marka la barbar dhigo barnaamijyada kale ee taageeraya qaabab badan oo ka baxsan 3D Madaniga), Kordhinta xulashooyinka ee taageerada dhibcaha sida caadiga ah oo caadi ah ayaa muuqata. Hadda, markii la dooranayo shay noocan ah, xarigga waxaa lagu hawlgeliyaa hab macnahiisu yahay helitaan fudud, waxaa ka mid ah xulashooyinkaan la iska jarayo cutubka.
Sidoo kale miiska guryaha, waxaad fayl-gareeyn kartaa tallaabooyin gaar ah oo loogu talagalay walxaha dhibcaha.
Waxay taageertaa feylasha sawirka nooca Faro (fls, fws, xyb) Standard ASCII (xyz, txt, asc), las, Leica (ptg, pts, ptx) iyo Topcon (clr, cl3). Qaabka ay u shaqeyso waxay la mid tahay rarka feylasha tixraaca, awood u lahaanshaha qaabeynta midabka, xoojinta iyo xulashada abuurka.
Weli waa in la arkaa sida ay u maareyso xusuusta kumbuyuutarka, oo had iyo jeer daciifnimo ku ahayd AutoCAD, horumarin ku saabsan noocaan '2013' ayaa loo maleynayaa tilmaamidda iyo soo dejinta dufcadda. Waxaan ka tagnay isweydiinta sida arrintu ula socon doonto xiriirka Pointools, oo wax badan ku lahaa waxa AutoCAD ay hadda ku guuleysato tan, si kastaba ha noqotee shirkaddaas oo ay heshay Microstation iyo waxa ay doonayaan inay la sameeyaan Descartes, hubaal way adagtahay in laga adkaado.
Marka aad kaydinayso faylka hore ee dwg 2013, nidaamku wuxuu ku wargaliyaa isbeddelka iswaafajinta.
Isbedelada kale ee yar yar
Guddiga Doorashooyinka hadda ma ahan mid hadda ku jira tabeelaha Viw laakiin qaabka
Horudhaca horudhaca sawirka ee sawirrada ayaa hadda indhahoodu yar yihiin
3D in taabato shay, aad u yar, ka fiirsato dusha uun qalooca iyo extrusion amarka PRESSPULL in inkastoo aan amarka cusub (Caddayn), kicisaa doorasho fog extrusion mar dambe wax la soo xulay.
Marka aad dhoofinayso qaabka, taliska amniga ayaa hadda la fuliyaa, si aysan goobadu u soconin sida garoomada
Bakhshiinka ayaa hadda la arki karaa marka la eego, sida qaynuunka caadiga ah ee microstating
Labada guji hadda waxay kicinayaan edebta qoraalka
Waxaa jira kaalmo ku saabsan kaydinta daruuraha, waxaad wadaagi kartaa oo aad furi kartaa iskaashato adigoo u maraya AutoCAD WS
Laakiin tani waa dib u eegis horudhac ah, ugu dhawaan 5 ka hor intaan la sii daayo AutoCAD 2013, markaa waa inaad sugto wax badan; iyo sidoo kale cusboonaysiinta ku dhowaad isku midka ah AutoCAD for Mac.
Nidaamka imtixaanka beta waxaa laga soo qaadan karaa: https://beta.autodesk.com/
Kuraasta waxaa ka mid ah cusboonaysiinta .NET Framework Runtime 4.0, Faro SDK, DirectX Runtime iyo qaar ka mid ah Visual C ++ maktabadaha.
Halkan waxaad ka arki kartaa dhammaystir buuxa Maxaa Cusub ee AutoCAD 2013, marka la barbardhigo noocyada sanadaha kale.
Post Previous" Hore Isticmaalka gacanta ee sawirada taariikhiga ah ee Google Earth
Post Next Abuur Curcaha Google Earth oo leh AutoCADNext »
72 Jawaabo "5 Maxaa Kucusub AutoCAD 2013"
Waad salaaman tihiin qof walba oo arkay dhowr bog oo isku dayaya Autocad isla markaana arkay aragtidooda kana soo horjeedda, qaybtayda waxaan kuu sheegayaa in autocad ay saaxibtinimo la leedahay astaamaha ama amarrada gaagaaban laakiin waxay kuxirantahay waxa aan soo jiidan doonno. Tan iyo haddii aan rabno inaan si dhakhso leh u sawiro qaybta farsamada waxaan soo jeedinayaa inaad isticmaasho Inventor, SolidWork ama CATIA oo haddii aad u jiidanayso qorshe naqshadeeye waa REVIT, in kabadan 20 sano iyo inaad isticmaashay Autocad iyo naqshadda naqshadaha naqshadeynta, farsamada, qaab dhismeedka, qorshayaasha paileria , iwm. waxayna igu siisay natiijooyin. Meksiko inta badan warshadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba waxay adeegsadaan Autocad oo ma ahan nooc hadda jira haddii aan qeybo ka mid ah laga soo qaadin '2000' ilaa 2005 tan iyo markii iibsashada nooc cusub sannad kasta ay qaali noqon laheyd, sidaa darteed farshaxanku waa inuu la qabsadaa in qoraalladaan. Ku habboon in la soo koobo dhammaan barnaamijyada CAD waa mid wanaagsan oo mid walbaa wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo khasaaraha uu qof walba saaxiib la yahay haddii farshaxanka ama naqshadeeyuhu uu iska dhigo sida ugu wanaagsan ee uu isagu awood u yeelan karo inuu u hoggaansamo oo uu u yeesho samir uu ku barto sida loo maareeyo, iyada oo aan la helin dulqaad iyo rabitaan Baro barnaamij kasta oo aan u arki doonno inuusan ahayn aalad laakiin cadow. Salaan wanaagsan dhamaantiin.
dhamaantood, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo qaabeynayo cabbir ama qoraal si ay u haysato asal ah iyo in xilliga bedelka midabtakoorka uu sidoo kale isbedelo.
Dhismaha Digital isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan barnaa koorsada aasaasiga ah ee "AutoCAD AutoCAD" ee jimicsiga, laga bilaabo masaafada.
Waxaad arki kartaa ajandaha, habka iyo faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan boggayaga internetka: http://www.paisajismodigital.com/index_esp.htm
Waqtigan xaadirka ah "Course AutoCAD Course for Daahfurka" ayaa ku jira dhiirigelinta qiima dhimista 50 ee liiska qiimaha.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad nooga soo qori kartaa boostada: courseadistance@paisajismodigital.com
Ama telephonically isgaadhsiin: (00 34) 93 176 96 53
Xarunta Waalidiinta: http://www.paisajismodigital.com/cursos
Xarunta Fudud ee Facebook
Mariela Acosta isagu wuxuu leeyahay:
qof ayaa ii sheegi kara halka aan ka iibsan karo koorso autocad ah oo guriga ka barata
Jc isagu wuxuu leeyahay:
Meel dhig amar "dacdiya" oo geli variable ka soo horjeedda midka waqtigaas. Waxaan rajeynayaa inaad dhibaatadaada xalliso
Jorge Andres isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rakibay gawaarida 'autocad 2013 mac', waan qaldamay maxaa yeelay waxaan ku dhacay 30 maalmood ikhtiyaar, hadda sideen ku sameeyaa si aan u jabiyo markaas waan ka saarayaa markaan markaan rakibo sida aan u sameynayo igama milmayso ... maxaan sameyn karaa?
kary isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan la isticmaalayo 2013 autodesk marka aan furo file a in la badbaadiyey la Autodesk 2012 ama 2011, waxa aan aaminsanahay in dhowr qaabab warqad des qaybiyay aan isku eegto, sida aan sameeyo si sax ah wax kasta oo la mid ah sida marka aad ka shaqayso qayb kale oo sidaas darteed ma aha in dib loo saxo qaababka.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto !!
amarka lagu furfurayo daaqadaha waa fileyn, tan ayaa kicin doonta daaqada browserka
Dalan isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan haystaa Autocad 2013 iyo amar tixraac ahi ma shaqeynayo sidii hore oo kale qof ayaa ii sheegi kara sida aan u isticmaali karo maadaama loo isticmaalo Autocad 2011?
Julian isagu wuxuu leeyahay:
«Qofna ma garanayaa sida aan ugu tagi karo habka caadiga ah ee autocad 2013 ee mac ??
Cris n__n isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u furi karaa faylka Autocad 2012 ee 2013? esque sida ay u furantahay .. laakiin wax iima muuqdaan ...
Sidee baan u geyn karaa autocad2013 qaabka caadiga ah? Sidoo kale, waxaan ku leeyahay Ingiriis mana fahmin wax badan. Waad ku mahadsan tahay
Dodanim isagu wuxuu leeyahay:
Bilow liiska A> Fursadaha> Muuqaalka> Culeyska Daaqada> Muuji Baararka Wareegsan. daaqadda sawirka
Hervin Pinzon isagu wuxuu leeyahay:
No, at xaq u hooseysa waa icon ah taas oo u eg marsho ah, PICA oo halkaas iyo fursadaha kala duwan, click on baahida loo qabo iyo waxaa sii badbaadi kartaa caddaymaha kala duwan ..
Waa amarka FILEDIA ee naafada ah
Raadi maqaal ku yaalla isla boggan oo sharxaya sida loo xallinayo.
Waa salaaman tahay, markaan riixo amarka 'furfuran', ma helo sahamiyaha, waxa ii muuqda waa xarriiq amar-wareejin ah oo leh cinwaanka diyaaradda furan ee ugu dambeysay. Sideen ku heli karaa sahaminta daaqadaha mar labaad inuu muuqdo?
Jhonk Master isagu wuxuu leeyahay:
Hal su'aal, In AutoCAD 2013 boosaska shaqada, miyaa la waayay qaabkii caadiga ahaa iyo sawir qaadista iyo naqshadeynta 2D?
dhinaca bidix ee dhinaca bidixda waxaad ka daawan doontaa punctos halkaasoo aad u jiidi karto dhinaca geeska kaas oo ku dhejinaya sawir weyn iyo kuwa dabacsan oo aad ka tagi doonto sida noocyada hore
Waxaan su'aal ka qabaa autocad 2013… sidee ayaan uga dhigayaa xariiqda taliska inay u ekaadaan kuwii hore… weyn… Waxaan arkaa inay aad u yartahay mana jecli… .mahadsanid
BERMUDEZ isagu wuxuu leeyahay:
waa wax aad u fara badan oo ka mid ah baakadaha cusub ee ku jira ama aan laheyn wax dhibaato ah
GOOBEYNTA FOX isagu wuxuu leeyahay:
Hello Daanyeel AAD AUTOCAD ABRES qalab iyo TAGISTA FUR FURSADAHA inaad doorato IYO SAVE IYO SIDA AAD U DOORO AAD faylasha SAVE THE AUTOCAD ASI arki doonaa SHAQAYNTA qoraalkii DHAAFAY
Hello DAY FIICAN IN AAD AUTOCAD 2013 marsatid u rights reserved in shuqulka oo dhan lagu AAD EE vercion A DAAHA si aad iyaga u shaqayn karaa VISUALISARLOS IYO VERSION WAX KALE EE AAD doona qalabka IYO FURSADAHA FURAN IYO SAVE aad doorato IYO AAD BADALI DOONAA maraggii uu VERSION
Markaad ku kaydsanayso faylasha AutoCAD 2013, dooro inaad ku keydiso sida 2010 version, markaa dhib uma heysana inaad aragto qaabka aad ku leedahay gurigaaga.
tashi A ee aan jaamacad u leeyihiin in ay CAD 2013, laakiin guriga aan isticmaalo 2011 ah, oo aanan ka furan kartaa arhivo ee 2013, sida waan ku samayn karaa si aad u furto, aad awoodo ama aan qabo si ay u degaan 2013 ah?
Sebastian isagu wuxuu leeyahay:
markii aan bilaabay isticmaalaya kombiyuutarada, halkaas ee sano ee dugsiga sare, waxaa jiray wax qabteen aan fiiro, ilaa aan la kulmay autocad (version 10), isagoo garanaya barnaamijkan, waxaan fahamsan yahay waxyaabo badan oo aad samayn karto iyadoo mashiinada kuwan, ka kulan caadi ah, in barnaamijyada sare ee AutoLISP, waxaan laga yaabaa marnaba dhamaystirno duugay gacanta ku Leroy guri oo badan ka yar in ay sii joogaan satirfecho natiijada, iyada oo aan encambio la autocad waxaan boqolaal ama kumanaan samaysay, oo anna waxaan noqday Engineer, iyada oo loo mahadcelinayo qalabkan kaas oo aad ku baran kartid xisaabinta sababtoo ah sawirka (automatic)
Waxaa jira barnaamijyo kale oo ixtiraam leh sida waraaqaha, kuwaas oo laga yaabo in ay ka fiicnaadaan, iyada oo ku xiran go'aanka ah in midkeen kastaaba uu ka faa'iideysanayo iyaga.
Aan isticmaalin waxa autocad in 100%, tan iyo mid kasta oo inaga mid ah baahiyaha kala duwan, in aan kiiska, waxaan nasiib si ay u bilaabaan mustaqbalkeyga ciyaareed ku saabsan waqti isku mid ah in xilligii of autocad, mar walba safka hore, in loo ogol yahay ii noqon more ahaa karti leh
haddii ay dhakhso u isticmaalayso amarrada la soo gaabiyo, iyo moodada oo kaliya si ay u xakameyaan zoom, iyadoo barnaamijyadaynta ayadoo la isticmaalayo qoraallo, waxay sameyn karaan waxyaabo la yaab leh.
Hugo blanco isagu wuxuu leeyahay:
Salaan Waxaan akhriyay faallooyinka ku saabsan mawduuca gaadhiga gaariga iga yaree waxyaabahan soo socda
Markii aan bartay sida loo isticmaalo qalabkan nashqadeynta, waxaa la baray inay wax ka qabtaan amarada gaagaaban si ay u ogaadaan asalkooda, Waxaan ku bixiyay koorsooyin dhowr ah koorsooyinka CAD-da waxaanan baray inay adeegsadaan amarada gaagaaban iyo amarrada ka muuqda Daaqad kasta oo ka mid ah barnaamijka sida laakiin ugu xumaa waa xafiisyo badan. Barnaamijku wuu xannibay hawl wadeenada mana yaqaanaan sida loo xaliyo dhibaatada ama sida looga baxo waa wax laga xishoodo mana u muuqdo inaan si xun u dhaleeceeyo kuwa barnaamijka ku shaqeynaya iyagoo adeegsanaya keyboard-ka laakiin haddii aan u sheego in habka loogu shaqeeyo kaliya astaamaha qof kasta ayaa wiilkayga soo jiida sawirada waana da '14 sano jir ah wuxuuna leeyahay daqiiqado uu doonayo inuu ku xaliyo dhibaato qaar waxa uu sawirayo iyo hadii uusan ka muuqan astaamaha, waxa uu sameynayo waa curyaamiyeen, kuwa waqti badan ku isticmaalaya softiweerka ayaa og. waxa aan ula jeedo, ma dhaleeceynayo kuwa loo maleynayo inay adeegsadaan astaamaha iyo runtu waxay tahay inaanan ku xalin barnaamijka barnaamijka 100% laakiin laakiin ah 25% iyo inta badan 35 / 40% qalabkan wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo kala duwan aad u faa'iido badan, sameyso qorshayaal caqli badan. Iyada oo la adeegsanayo waraaqaha, kombuyuutarrada, in la magacaabo wax sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad si badan u fiirsato softiweerka ka dibna aad faallo ka bixiso, waxaa jira oo aan u maleynayaa in hagaajinta lagu sameeyo qaybta 3d halkaas MicroStation waa mid saaxibtinimo badan haddii aan dhihi lahaa
Iyo sababta oo ah kama aanan akhriyin wax ku saabsan sida ay u qaadaneyso Civil3d 2012 inta la furayo, si loo qabto hawl kasta oo la saaro iyo waxa ugu xun ee haddii aad leedahay daaqado badan, aad u seexan karto xoogaa waxa ay rarto ... Iyada oo tiknoolajiyadda ay jirto iyo mashiinnada weydiisanaya in lagu socodsiiyo barnaamijyada iyo tan ugu dambeysa ee 3d 2012 ay umuuqato inaan u adeegsanayo autocad 13 daaqadaha 3.11 daa'in walboo hawl kasta ah ... waxaan rajeynayaa iyo inay horumar badan ka sameynayaan sawirka dhakhso u yeel markii otocad 14 daaqadaha la jajabiyey! waayo wuxuu ahaa kii ugu fiicnaa, anigu garan maayo sababta ay u horumarin kari waayaan ... Mahadsanid.
Haddii aad rabto in aad xawaaraha, waxaan ku talinaynaa in aad joojiso isticmaalka autocad oo isku day Archicad, waxaan dhawaan bedelay iyo inkastoo ayaase ah, ArchiCAD iyo autocad khabiir, waxaan la ArchiCAD joogo xawaaraha iyo saaxiibnimo ah, inuu ka hadlo ay barbaro galeen 3D aan Noqo mid la yaab leh, waa sida sawirka xirfadlaha ah, ee laga hadlayo.
Ma jiraa qof og sida baararka duudduuban ee toosan iyo toosan loogu muujiyey autocad 2013? Waxaan isticmaalayaa markii ugu horaysay kumana dhaqaaqi karo shaashadda maxaa yeelay baararka ma muuqdaan….
Waxa aan aaminsanahay in jiilalka cusub, haddii aan la barin koorso sida aad u eg tahay, waxay dayacin doonaan keyboard-ka, gaar ahaan shaqada 3D halkaas oo amarradu ku soo baxaan tab, wax aan horay loo qaban karin. Ku celcelinta hal gacan on jiirka, iyo tan kale ee ku jirta "keyboard" waa gudbinta afka, isticmaale keligiis wax ku barta, koorsada tooska ah ama koorsada "caadiga ah" iyada oo aan lahayn macalin garanaya faa'iidada, ma habboona .
Waa wax iska cad in haddii aan ku riday laba farsamo halka samaynta qorshe guri, labadaba leh waayo-aragnimo loo siman yahay, taas oo u isticmaali doonaa keyboard si degdeg ah.
Inkasta oo jimicsigu aanu shaqaynayn haddii ay isticmaalayaan qaab xuduud ah, sida Civil3D ama qaabaynta 3D dhismo.
Claudia Palomo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan baro AutoCAD, ardayda waxaan idin tusayaa laba siyaabood oo wax loo sameeyo: walxood iyo amarradiisa. Wariyaasha ay ilaa hal gacan shaqada oo doorbiday in keyboard la alias iyo dhinaca kale si jiirka. Out si fiican u yaqaanna gaar ahaan anigu waxaan ahay mid aad u picky ah oo ku saabsan sida aanu u shaqeeyaan, nadiif ah, sax ah oo aad shaqayso, si fiican oo dhakhso ah. Waxaan kiraystay tiro for shaqo oo degdeg ah, iyo dadka ka taliso barnaamijka iyo shaqeeyaa xawaaraha, had iyo jeer la shaqeeyaan amarrada soo gaabiyey, qaar ka mid ah ha isticmaalin hal bar amray, in aan ku xuso xirmado.
Ma aanan helin qof ficil ah si uu u soo qaato si dhakhso ah oo si fiican u saldhigga ah. Waqti badan ayaad luminaysaa xoqitaanka, xitaa haddii rikoodhadu ay yaraato (dhab ahaantii ma ah 5 cm halkaasoo jiirka uu u dhaqaaqayo si uu uga gudubto shaashadda).
Sidaa daraadeed kumbuyuutarku wuxuu ku dhici doonaa qalbi xumo waxaa laga yaabaa inuu noqdo kuwa aan lahayn baahida loo qabo in si tartiib tartiib loo shaqeeyo.
WILLIAN isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, waan arki doonaa
Laga soo bilaabo halkaas aad ka heli, buuxa.
AutoCAD ardayda waxay sii wadaa bilaha 36, taas oo ah sanado 3.
qof ayaa ii dhaafi kara xiriirka si aan u soo dejiyo barnaamijkan fadlan
Waxaan u maleynayaa in mararka qaar aan dalbado qalab, illoobo in ay timaaddo si loo xalliyo shaqada aan ka isticmaalnay guddiga sawir qaadista.
Laakiin waxaan u maleynayaa in sidoo kale la barbardhigo jadwalka ku sameeya codsiyada kale ee tartanka waxay naga dhigaysaa in aan hore u sii socono AutoCAD oo si tartiib tartiib ah, siiso tusaale tusaalaha 3D.
lui isagu wuxuu leeyahay:
Waa markii iigu horreysay ee aan fagaaraha galo, magacaygu waa Luis oo waxaan haystaa shahaadada ACP AUTODESK, waayo-aragnimo badan oo xagga maamulka softiweerka ah; Uma isticmaalo kaliya AutoCAD tan iyo noocdeeda 10 laakiin sidoo kale Dhulka, Khariidadda, Madaniga iyo kuwa kale ... bal qiyaas ... Wixii ugu fiicnaa ee waqtigaas la qabtay waxay ahayd hordhaca nooca 14 ... ka dibna nooca 2000 (waajibka magaca ee Millennium-ka cusub wuxuu u muuqanayaa Windows 2000, xafiiska 2000 iwm) halkan AutoCAD wuxuu ka bilaabanayaa madaahibta 4-lambar, in kastoo kuwa ogaada aan ognahay in noocyada khaldan ee AutoCAD ay ahaayeen sababta ugu xun ee 2000, oo ahayd inay ahayd 15, ay si xun uga bilaabatay Autodesk isla markiiba saxay dhinacyo gaar ah iyo nooca 2000 i oo halkan ka muuqday ma jirin wax isbedel ah oo ku yimid qaabka marka loo eego asalka.
Saabsan isticmaalka keyboard ah, waxaa aad muhiim u ah in aan tayadoodii AutoCAD waqti cad haddii aan u isticmaalno keyboard iyo mouse labadaba isku mar marka ay barbaro galeen, wax wanaagsan haddii aad isticmaasho mouse a loogu talagalay iyo barnaamijkii hawlo for AutoCAD.
Taasi waa habka aan bini aadamka nahay, dhadhanka shakhsi ahaaneed badanaa waxay noo horseedaa dhalleeceyn marar badan aan waxtar lahayn. Laakiin taasi waa waxa booskani yahay, si looga wada hadlo wararka iyo xaddidaadda su'aasha. Waxyaabaha ugu badan ee ay AutoCAD sameyso, ayaa sidan oo kale ah, iyagoo ka yimid su'aalaha dadka isticmaala ee sugaya inta jirta inay horumar sameeyaan.
Stephanie isagu wuxuu leeyahay:
Thanks for info. Inkasta oo aan u baahanahay in aan sheego in xajistiisa ciriiriga ah uu aad u dhibsado mawduuc aan u qalmin. Kuwa naga mid ah ee isticmaala barnaamijku waa ogyahay in ayan wax ka qabin wax horumar ah, laakiin tan iyo markii ay soo baxday waxay ahayd lacag la yaab leh ama waydiiso in ay soo qaadaan gacanta.
Marka laga hadlayo amarada, waxaan u maleynayaa in inteena badan aan rabno inaan baranno dhamaan hantaleyda, si aan ula shaqeyn karno “space model” sida ugu nadiifsan uguna dhaqsaha badan uguna macquulsan. Salaan dhammaan asxaabta xamuulka ah iyagoo adeegsanaya Auto CAD! =)
Aad u fiican oo aad u faa'iido leh, waxaan ka tagayaa shabakadan oo leh barashooyin Autocad iyo Tababar 2013 ah oo bilaash ah oo bilaash ah.
waxaa jira fiidiyowyo badan
Ininame isagu wuxuu leeyahay:
Jajaj dhigaysa igu qoslaan, erayada retrograde iyo cabsi in uu iyaga ka siinayo by sii daayo keyboard ah, haddii iftiinka nasiib CLARO¡¡ kombiyuutarada iyo / ama dib mail ah.
Waxaan qabaa badan ayaa dhacay ka dambeeya siyaabo ka casriyeeyo, waa in aannu sii daayay ka keyboard iyo mouse, iyadoo la isticmaalayo screens xiriiri multi kale oo badan oo isu maamuli karo iyo gaar ahaan deegaanka qalabka naqshadaha iyo design.
Haddii aan samatabbixiyo waxyaabahan cusubi waxay sheegaan in horumarkooda ay yar yihiin ayna ku dhow yihiin wax aan jirin.
Sl2 PC Architect
Eddy Guzman isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay arday naqshad leh, jaamacada aan ahay, waxay dalbanayaan in aan casriyeyno marka la eego barnaamijyada aan u adeegsan karno! oo waxaan ka soo shaqeeyay autodesk 2004 ilaa 2012,
iyo iyadoo aan loo eegin hagaajin interfaces iyo qalab, mid ka mid ah fursadaha shaqo fiican waa keyboard ah, waa run waa in aad leedahay xirfad iyo waayo-aragnimo ku filan, si fudud u ordi mause ka saaraan xad la'aan ah waqtiga, waxaan qabaa q waa xalka keliya ee dadka khibrad u leh kumbuyuutarka, jiilasha cusubi waxay caadaysteen wax aan ka badnayn!
jose luis vazquez parra isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaad iigu soo dirto caddaynta otocad cusub iyo sidoo kale siyaabo waxtar leh oo loo adeegsado isticmaalka qalabka wakhtiga.
Juan C isagu wuxuu leeyahay:
!!! Xaqiiqdii ma ogi haddii kuweena halkan jooga ay yihiin kuwo aad u dib u dhacay! mise ninka bilaa kumbuyuutarka ah ayaa aad u horumarsan !! Waxaan isku dayay gawaarida cusub ka dib markii aan isku qasbay inaan sameeyo 2012, taas oo aniga runtii ii ah cadaab ficil ahaan! aniga ahaan waxaan sii joogi lahaa 2004 ama 2006 ugu badnaan! markii aan ku shaqeyn karay 3d aniga oo aan haysan waraaqo badan oo hooska shaashadda waxyeello soo gaarto iyo waxyaabo la mid ah ... Waxaan u maleynayaa in aan wada ognahay in ay tani tahay ganacsi oo tan iyo markii ay ahayd 2007 noocii dambe aysan garanaynin waxa lagu sameeyo barnaamijka oo aan is beddelin haba yaraatee waa muhiim ... waxay damacsan yihiin inay ka dhigaan nooc eray ah oo qofkasta geli karo oo uu isticmaali karo taasna ma jirto .. waxay inagu qaadatay dhamaanteen inan si fiican u barto si uu bilowgu u yimaado oo noogu sheego in noloshiisa ay tahay inuu qabtay mashruuc ka soo horjeeday wakhtigii kiiboodhka waa duugoobay ... cajiib ah!
LUIS ALEXANDER isagu wuxuu leeyahay:
DIIWAANKA AUTOCADKA CUSUB EE UGU DANBEEYA INUU UU SOO JOOJINNAYNO '' WAA IN UU U SHAQEYSAA '' oo ay sifiican u adeegsaneyso FARSAMADA KEYBOARD, WAA IN AY KARAAN YAHAY BARNAAMIJKA oo aan kaheleynin waqtiga aad kureyso "Furaha" FARMAAJO OO INUU KUUGUGU GUDOOMIYAHA KHATARTA Raadinta CARUURTA, INTII WALBA WUU OGAAN KARAA MID KA MID AH NATIIJADA, MARXALADAHA AAN LAHAYN IYO WAXA AY SAMEEYAAN SAMEEYAASHA DHAQAALAHA.
Shaki kuma ISBEDELKA LA SOO OF AUTOCAD la KOOBAN IYO fiicnaan (gaar ahaan qof aniga oo kale ah kuwaas oo ka shaqeeya ka soo R12) Hagaajiyey MUCHISIMO interface iyo gaar ahaan MAARAYNTA EE xasuusta (XATAA LA TECHNOLOGY OF PC HADDA barnaamij kasta ordi karaan lacag la'aan ah, i7, 16GbRAM, VIDEO4Gb, ETC).
… Waxaan jeclaan lahaa inaan arko muuqaalka mid ka mid ah asxaabta oraahda ah ISTICMAALKA KEYBOARD WAA LAGU XUSUUSAN YAHAY HADII AY LA SHAQAYNAYAAN CIVIL3D, TUSAALO AH… MA JIRO MEESHA AAD KA HELI KARTO LAGU LEEYAHAY INAY KU LEEYIHIIN RAYNAHA ISKA LEH + DHAMMAAN DHAMMAAN MUUQAALKA WAA IN LA ISTICMAALAA AUTOCAD!
GREETING ALL ALL!
Hagaag, waa inaad sameysaa, keydisaa oo doortaa nooca uu macmiilkaagu u baahan yahay. Ama hadduusan ahayn, adeegsiga beddelaha dhabta ah ee 'Autodesk' waa mid bilaash ah oo u oggolaaneysa wada-hadallo noocyo kala duwan ah.
goobta toledo isagu wuxuu leeyahay:
Had iyo jeer ka feker
Aan sameeynayay qaar ka mid ah diyaaradaha IN AUTOCAD 2013 laakiin markii aan iyaga u soo diray MACAAMIISHA ME MAXAA LAGA YAABO MA sheegay FURAN AY LEEYIHIIN version A of 2010 2009 ama sida ay kuu sameeyo FUR KARAA WARQADDA?
Patricia Moncada isagu wuxuu leeyahay:
Hello, qof ayaa ii sharrixi kara sida aan u habeyn karo xuduudaha Autocad 2013. Waad ku mahadsan tahay
Waa hagaag, salaan dhamaan.
Qodobbada cadadu waa ay fiicanyihiin illaa inta aanay saameynin waxqabadka shaqada.
Waxa aanan u maleyneynin wax macquul ah, waa in la isticmaalo nooc aad u casri ah, sirta ah "the last".
Anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwa u maleynaya in barnaamijyada, illaa iyo inta ay la jaan qaadayaan kuwa kale miles tuulada mayl.
Su'aasha labaad, waxaa lagu sameeyaa qoryaha taliska, raadinta internetka, waxaadna arki doontaa in ay jiraan muraayado hore loo sameeyay 3D ama 2D oo keliya si ay u geliyaan.
Sidoo kale AutoCAD waxay keenaysaa Xarunta Naqshadeynta, halkaas oo ay jiraan walxo kale.
geedka canabka ah ee khudradda isagu wuxuu leeyahay:
hello qof walba dhadhan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida loo jarayo maya in la sameeyo xayiraadda si uu u sameeyo daaqada autocad 2013
kan labaad waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan uhesho walxaha fudud ee qolka, waxaan ku sharaxayaa, markaan sameeyo jikada, waxaan jeclaan lahaa in aan jiko, alaab guri, miis, kursi, iwm.
waad ku mahadsantihiin inaad iga jawaabto
PS: Waxaan jeclaan lahaa in macluumaadka loo diro boostada
Marina Forteza Sureda isagu wuxuu leeyahay:
Salaan Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado: Waxaan haystaa tababaraha 2013 ee mac (waa Ingiriis) had iyo jeer waxaa lagu keydiyaa tababaraha 2013 mana heli karo sida loo habeeyo si otomaatig ah loogu keydiyo nuqul hore si aanan u dhigin markasta oo aan keydiyo ... Maaddaama qaar badan mararka qaar waan ilaawaa. Autocad-ka daaqadaha way fududahay in la dhigo laakiin midka loo yaqaan 'mac' ma jirto wado lagu helo xulashadan ... Qofna wax ma ogyahay?
Tavo isagu wuxuu leeyahay:
Gabdhaha! Waxaa la joogaa waqtigii ay la cusbooneysiiyaa, keyboard waxa ay mar horeba ka baxsan isagoo aad u innoo, ma walxood oo cusub oo ka cabsan adapterse, la keyboard gaar ah ay u leeyihiin in ay ogaadaan oo dhan tuuryo in ay idin fari inaad u leeyihiin in ay leeyihiin wax badan oo xirfad oo isku mid ah oo aanad ku dhejin luqadda aad ku haysato Autocad, Ingiriisku isku mid ma aha sida Isbaanish. Waxaan la autocad ka R14 shaqeeyaan oo aan updated dhan versions in la timaadeen maanta, tan iyo ka tago toolbars ahaa ugu wanaagsan ee ay urursadeen karo oo haatan soo hagaagtay iyadoo fursadaha marsami (oo hore loo odhan Ribbon ), fari iyo astaamo ay yihiin kuwo aad, mid wax tar leh oo ay tahay kaliya oo wax ku qabsashada iyo aad meel raaxo badan si aad u shaqeeyaan, si cajalado waxaa ma ahan oo keliya bilowga ah sida badan ku xusan, laakiin sidoo kale for kuwa aan nahay dhiifoon mouse waa isticmaalka aad u yar ee keyboard ah inta badan waa in la siiyo qiyamka, waxaan diyaaradaha si dhakhso ah oo la ogaado amarrada ku jira labada Ingiriisi, sababtoo ah anteriomente yimid sida ee Spanish luqaddan maanta ma aha xitaa lagama maarmaan in la raadiyo barnaamijka ku jira nuqulkan, laakiin si fudud u cusbooneysii luuqada oo aad sameysey. sida waan ogahay tuuryo keyboard ah, laakiin in haddii Autocad leeyahay amarrada aad u badan in ay tahay wax aan macquul aheyn si ay u bartaan oo dhan iyaga oo kale, kaliya loo isticmaali ugu muhiimsan iyo sababta aan ku talinaynaa in aad ha of keyboard iyo mouse isticmaali yahay waa ka fiican yahay.
KEYBOON WAXAA LAGA HELI KARTAA WAQTIGA WAQTIGA KA HELI KARO, WAXAAD KA QAADAN YAHAY YIHIIN IYO WAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD HESHIIN
Sergio Lima isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiiqdii isticmaalka keyboard-ka ayaa ah mid aad u faa'iido leh, qeybaha cusub waxay la qabsanayaan «gaagaaban» isla amarrada, sida COPY, ka hor Acad2004 waxaad ku qasbanaatay inaad M M goor dambe ku qorto nuqulo badan, laakiin markaa taasi waxay ku dhacday si caadi ah, qaabka Ribbon Waxay i xiiseyneysaa dadka isticmaala cusub, laakiin kuwa sii horumarsan waa wax aad looga xumaado, uguyaraan waxaan isku dayay inaan ku isticmaalo Acad2011 mana awoodi waayey inaan la qabsado, waxay igu qaadatay laba jeer illaa iyo asbuucaas inaan isku dayo inaan isticmaalo.
Dejinta qaababka cabbiraadda waa inaysan noqon mid aad u adag
Ma ogtahay sida loo isticmaalo kumbuyuutarka kumbuyuutarka?
Sababtoo ah haddii aad u adeegsan laheyd markii aan bilaabay isticmaalka AutoCAD, waad ogaan doontaa inaan qorey amar kasta (Waxaan isticmaalaa AutoCAD waxaanan wax ka baraa nooca R12). In yar si kooban ayaan u isticmaalnaa keyboard-ka waxyar, boodhadhkuna way faa'iidaysan yihiin, laakiin waqtiga ayaa lagu lumiyaa wadada marka waxa ay ku soo noqnoqonayaan. Sidaa daraadeed, amarro badan oo jidka la joojiyey ayaa la joojiyey, sida kiiska Fence ee Trim, inkasta oo ay jirtay waqti dheer kahor, sida kaliya ee ogaa inay lagama maarmaan tahay in la galo xarafka F kadib taliska Fence, ayaa joojiyay isbeddellada isticmaalka yar. Waxyaabaha ay ka midka yihiin gelitaanka ciladaha jihooyinka iyo masaafada waa si daacadnimo badan.
Shaki la'aan, kuwa annaga ka mid ah kuwa wax bartay ka hor AutoCAD 2009, ayaa bartay in loo isticmaalo keyboard-ka furayaasha iyo furaha xajmiga oo leh xirfad weyn. Laakiin su'aashaydu waxay tahay in tan badankeeda lagu wanaajin karo iyada oo la adeegsanayo menusyada macnaha guud.
Walla isagu wuxuu leeyahay:
Isticmaalka macquulka ah ee keyboard? waxaad arkaysaa in aadan waligaa isticmaalin autocad, kaliya oo la shaqeynaya kumbuyuutarka waa yaab iyo waxa ka dhigaya waqtiga ugu fiican
H. FLORES isagu wuxuu leeyahay:
Uma maleynayo in ku dhaarashada amarrada ereyga furaha ay noqon karto mid wax ku ool ah isla markaana waqti badbaadinaysa halkii aad ku qaban lahayd "jiirka" tusaale ahaan "zomm" "Extents"
z soo gal oo soo gal (ma qaadaneyso mid labaad) ka dibna waa inaad ku tilmaamtaa "E" "jiirka"
Waxaan u maleynayaa inaad ku aragto habka amarka ama laba jeer gujisid faylka la soo gaabiyey ee loo yaqaan (caadada) ayaa lagu dhejin karaa ama la
En http://www.peruviantec.tk Waxaan sidoo kale arkay sawirrada 200 Autocad, waxaan ku talin lahaa.
JCampirano isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aad rabto inaad xawaare ku sameyso qorshooyinka, waxaa ugu wanaagsan inaad furaha furaha u dhigto hal xaraf halkii amar ah iyo labo markii lagu soo celiyo (isku day inaad waqti badbaadiso), u isticmaal baloogga booska sida soo gal. Astaamaha waxaa adeegsada kuwa bilowga ah, ama waxay isticmaalaan 'autocad' si ay dib ugu eegaan qeyb ka mid ah macluumaadka, ama kuwa caadeystay oo aan raadineynin dariiqooyin cusub.
Magno isagu wuxuu leeyahay:
Ma fahmin, waxa loo baahan yahay in laga dacwoodo Autodesk oo ku saabsan booska sawirka badan haddii isticmaalka isku-darka muhiimka ahi uu na siinayo marin u helidda amarrada aad iskudubbaridi karto iyadoo loo eegayo baahiyahaaga amarrada magacyada, hadda booska sawirku waa lagu dhejin karaa shaashadda oo dhan, gaar ahaan sheeko-bixinnada cusub ee aad faallo ka bixin karto dhammaantood waa kuwo duug ah oo laga soo qaatay noocyadii hore, iyo kuwa saboolka ah oo aanan ka helin wax ka khuseeya qaabka cusub.
MA CL isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan hayaa Autocad 2012, oo ah nooca tijaabada ah lagumana rakibi karo kombuyutarkayga. Farriin khalad ah ayaa u muuqata shey kasta, AUTODESK & FUSION INVENTOR ...
Markaad bilowdo inaad ku rakibto NetFramework Runtime, waxay joojinaysaa daboolka oo uu ka muuqdo farriimaha ERROR.
Waxaan sameeyay koorso waxaanan si wanaagsan u ansixiyay, waxaanan doonayaa in aan wax badan barto maalin kasta, laakiin waan ka qoomameynayaa inaanan awoodin in aan barnaamijka soo dejiyo. Waxaan haystaa HP 610 1262, 8 Mb RAM, Intel 5i-
Horey ayaan usameeyay beta.autodesk.com, laakiin ma fahmin sida loo noqdo tijaabiyaha beta, hadii g! Ma ii sharixi kartaa, si aad u soo dejiso Autocad 2013, laga yaabee inaysan wax dhibaato ah i siin doonin ...
Isu qor beta.autodesk.com oo halkaas ayay kugu siin doonaan macluumaadka. Hagaag, kuwa kaqaybqaata sida tijaabooyinka beta waxay aqbalaan qawaaniin gaar ah markii la aqbalo oo la ilaaliyo sida tan.
Galab wanaagsan, qaar idinka mid ah ayaa geliyay AutoCAD 2013 Beta RC. Miyaad jeceshahay inaad i siiso Key Fure, oo aan u baahanahay inaan ku rakibo?
Dabcan, waa hal shay oo loo isticmaalo gaaban:
L + gali
z + enter + x + gali
Laakiin intaanan iman ka hor, waxaa la qoray amar kasta oo la qoray.
Si kastaba ha noqotee, Waxaan u arkaa inay jiraan waxyaabo ku saabsan hawlgalinta amarrada la fududayn karo, gaar ahaan markay yihiin soo noqnoqoshada joogtada ah. Arintaas awgeed, qoro qoraal xariijinta shaqsiyeed, waa inaad had iyo jeer muujineysaa cabirka iyo jihada, goorta ay noqon karto wax ficil badan.
XABIER CARRIZO isagu wuxuu leeyahay:
'Isticmaalka kumbuyuutarka taariikhda kahor' waa isticmaalka maanta la sameeyo. Waxay umuuqataa in qofna uusan ogeyn kiiloomitirrada laga sameeyay shaashadda,
si fudud adigoo u wareegaya jiirka si aad u tagto amarka (icon) ka dibna ku noqo meesha aad sawirto. Ma aha in la sheego goobta-shaashadda in dhammaan baararka, qaanadaha, iwm. Dhammaantood ku saabsan.
Waxay qaadataa meel bannaan oo lagu barbardhigo, dadka oo baro in aad labadii gacmoodba shaqeyn kartid, amarrooyin la soo gaabiyey, iwm.
Thanks for info ah, laakiin waxa ay u muuqataa aadan aqoon sida waxtar leh ay tahay in ay ka shaqeeyaan ee keyboard iyo sida degdeg ah ee aad sawiri kartaa badbaado la siinayo qasabno badan oo raadinaya walxood in ay wax ka qaban oo ma ahan oo keliya in autocad laakiin barnaamijyada oo dhan, aad waxaan leeyahay ka waayo-aragnimo iyo maxaa yeelay, waxaan wada arkay shaqaale badan oo la amarrada keyboard saafi ah oo u shaqeeya barbaro iyo xawaaraha waa ka weyn yahay qof keliya la mouse iyo astaamo shaqeeya. Salaan.
Tito Machicado isagu wuxuu leeyahay:
Autocad waxay u baahan tahay inay kor u qaaddo shaqada laba xabbo, marka lagu daro isgoysyada tooska ah. Kordhinta qalabyada, gaaban, horumarinta shaqada ugu sarreysa ee 2d.
Carlos Castillo isagu wuxuu leeyahay:
Qaar ka mid ah isbeddelka iyo autocad 2012 waxay leeyihiin iyaga, oo ku saabsan faallooyinka ka baxaya kumbuyuutarku waxay u muuqdaan kuwo jilicsan. maalin kasta waa ka jahwareer badan tahay in ay ka shaqeeyaan isgoysyada cusub, hase yeeshee maskaxda gaaban marwalba way sii jirtaa mana aha arrin ku xirnayd meesha keyboardku had iyo jeer yahay marxalad.
Waxaan doonayaa inaan arko waxa saameynaya waxyaabahan cusub ee ku jira dhismaha autocad taas oo ah waxa aan runtii isticmaalo. mahadsanid macluumaadka
Jorge Cardoze isagu wuxuu leeyahay:
Waxyaabaha cusub ee autocad 2013 keena https://beta.autodesk.com/
Cadipesa isagu wuxuu leeyahay:
Dhawr ka mid ah aaladaha aad tilmaamayso inay cusub yihiin, ayaa hore loogu haystay noocyada 2012 iyo qaar 2011, sida taageerada leh daruuraha dhibcaha, iskaba daa midabka qoraalka iyo hufnaanta khadka taliska. Amar kale oo aan cusbeyn waa Presspull. Waxaan u maleynayaa inaadan cusbooneysiin ...